Archive du 20170130
Loza mahatsiravina tany Anjozorobe 47 no maty, 24 naratra mafy
Loza amin�antambo no nitranga tany Anjozorobe ny marainan�ny sabotsy 28 janoary teo.
Fifidianana 2018 Manomana ny paikadiny ny ARMADA
Raha tsy heno nandritra ny fotoana ela dia manomboka mipoitra indray ankehitriny ilay vovonana politika teraka teny Ambodivona, fantatra amin�ny anarana hoe � ARMADA �,
Faha-70 taonan�ny raharaha 29 martsa Hiavaka ny fankalazana
Ny fiandohan�ny volana febroary dia hanomboka sahady ny fankalazana ny fahatsiarovana ny faha-70 taona nisian�ny raharaha 29 martsa 1947 na ny tolona nivaivay nanoherana ny fanjanahantany frantsay tamin�ny fotoan�androny.
Misisika eto ny vahiny Hitavana ny harem-pirenena, hoy ny AKFM
Tsy ny filoha Tiorka ihany no mankaty Madagasikara fa maro ireo firenena mifandrombaka sy miady sisika ho aty amintsika, hoy i Eric Rakotomanga, mpitarika ny antoko AKFM.
Tany eny Antaninarenina Mandainga ny fanjakana
Nahabe resaka indray tato ho ato ny resaka tany mampifanolana ny minisitera eo anivon�ny prezidansa misahana ny tetikasan�ny filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana (M2PATE) an-daniny sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra ( CUA) an-kilany.
Fetison Rakoto Andrianirina Mahafinaritra an�izao fitondrana izao ny mampitebiteby ny Malagasy
Miditra amin�ny taona fahatelon�ny fitondrana Rajaonarimpampianina isika izao, tsy mbola hita foana ny lalana hivoahana amin�izao fahantrana izao.
Any Jean sy Ramala ! Arahaba madinidinika sy akory fantimpantenana no atolotra anao ry Jean tsy maty fo aman�aina vokatr�izao loza efa mihatra amintsika izao a !
Kardinaly Pietro Parolin Nampitraka sy nampahery ny Malagasy
Tontosa omaly alahady teny amin�ny kianjambe monisipalin�i Mahamasina ny lamesa lehiben�ny Eglizy Katolika Romana notarihan�ny sekreteram-panjakan�i Vatican ny kardinaly Pietro Parolin ho fankalazana ny faha-50 taonan�ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin�ny firenena Malagasy sy ny Fiketrahana Masina.
Mahafantatra ny hetaheta
Tehaka nirefodrefotra no nasetrin�ny mpiara-miasa amina minisitra iray nandritry ny fifampiarahaban�izy ireo nahatratra ny taona ny faran�ny herinandro teo rehefa avy nilaza ho mahafantatra ny hetahetan�ireo mpiara-miasa aminy ingahy minisitra.